တရားဝင်အတိုက်အခံပါတီမရှိဘဲဒီမိုကရေစီမဖြစ်နိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » တရားဝင်အတိုက်အခံပါတီမရှိဘဲဒီမိုကရေစီမဖြစ်နိုင်
- Oo Bo
Posted by Oo Bo on Apr 4, 2010 in 2010/2012/2015 Election |4comments
Burma Herald Myint Shwe NLD
ဧပြီလ ၁ ရက်
ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပါတီသက်တမ်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံရေးလုပ်ဟန်အရရှေ့ နောက်ညီညွတ် သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများသည်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတစ်ခုခုကိုချိန်ရွယ်၍ထုတ်ပြန်ခြင်းမဟုတ်ဟုငြင်းခုံလိုကငြင်းခုံနိုင်သည်။ သို့ သော်လူပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗဟိုပြု၍တည်ထောင်ထားသောအဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်အဖို့ ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုရုတ်တ ရက်ချက်ချင်းစွန့် ပစ်ရန်မဖြစ်နိုင်။ အထူးသဖြင့်ထိုသူမှာအချိုးနှိမ်ခံ ထားရ (incarcerated) သည့်အချိန်မျိုးတွင်ပို၍မဖြစ်နိုင်။
ထို့ ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိုင်ငံရေးအရဆုံးဖြတ် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ “ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ စဉ်းတောင်မစဉ်းစားဘူး”ဟုမှတ်ချက် ပေးလိုက်သောအကျဉ်းကျခေါင်းဆောင်နှင့်တသားတည်းရှိကြောင်းပြသ သည့် “ခံစားချက်” ကလာသည့် “ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်”ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်သည်။
တဘက်တွင်လည်းရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်အတွက်ပါတီကိုအသစ်တဖန်မှတ်ပုံမတင်လျှင်နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်အဖြစ်မှအလိုလိုပျက်ပျယ်စေရမည်ဟုဥပဒေကဆိုထားပြန်ရာတင်းမာသောလမ်းကြောင်းကိုချဖြစ်အောင်ဆော်သြခဲ့သူများ သည်စစ်အစိုးရကပါတီဆိုင်းဘုတ်ကိုလာ၍ဆွဲချပစ်မည့်နေ့ ကိုထိုင်စောင့်နေ ကြရင်းNGO ဆန်ဆန်လူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလုပ်ကြမလိုလို၊ မြေ အောက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းတွေဘဲလုပ်ကြမလိုလိုလေသံပစ်နေကြသည်။
NGO ပုံစံဖြင့်လူမှုကူညီရေးလုပ်ရန်စိတ်ကူးမှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးဘ၀နှင့် အနှစ် ၂၀ ကြာနေလာခဲ့ပြီးကာမှ ဗြုံးစားကြီးလူထွက်၍ဆိုက်ကားနင်းစားဖို့စိတ်ကူးတာနှင့်တူနေလိမ့်မည်။ အတော်ကိုးရို့ ကားယားနိုင်သည်။
ဤစိတ်ကူးကိုလေသံပစ်သောလူကြီးတစ်စုသည်NLD ကသာဤလုပ်ငန်းကို လုပ်လျှင်အနောက်နိုင်ငံတွေကအလှုငွေတွေအလုံးအရင်းနှင့်လာလိမ့်မည်။ ထိုအခါကျမှစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုအောက်တွင် မွဲပြာကျနေသောလူထုကိုပေး ကမ်း၍သြဇာညောင်းလာအောင်စည်းရုံးနိုင်လိမ့်မည်ထင်ထားပုံရသည်။
မွဲပြကျနေသောလူထုကိုဤသို့ ပေးကမ်းကျွေးမွေး၍နိုင်ငံရေးသြဇာထူထောင် သောအလုပ်ကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့ တွေကအစိုးရငွေဖြင့်လုပ်နေတာအနှစ် ၂၀ နီးပါးရှိနေပြီ။ အာဏာနှင့်ငွေ ၂ ရပ်ပေါင်းလုပ်နေတာတောင်လူထုကိုအမှန် တကယ်မသိမ်းသွင်းနိုင်သေး။
အနောက်နိုင်ငံအစိုးရများကိုယ်တိုင်ကလဲစစ်အစိုးရ၏ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို လက်ခံထားပြီးသားဖြစ်သည်။ သူတို့ တစ်လျှောက်လုံးမျက်စေ့မှိတ်ထောက်ခံ ခဲ့သူအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမပြောသာ၍၊မပြောရက်၍ဖိအားကိုဘက်ပြောင်း၍မပေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရဘက်ကလျှော့အောင်လုပ်၍မရနိုင်မှန်းသိ ကြလျှက်နှင့် လူကြားကောင်းအောင်ဆက်အော်ပေးနေခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်ရာ ဘယ်သူမှ မျက်စေ့မလည်ခဲ့ပါ။
တဘက်တွင်လည်း 3DFUND, WHO, FAO, World Vision စသောသမ္ဘာရင့် professional NGO ကြီးများကိုရံပုံငွေထည့်ဝင်နေကြပြီဖြစ်ရာ NGO အရေခြုံ ကာနိုင်ငံရေးလုပ်မည့်NLDထံကိုလက်ပြောင်း၍ထည့်လျှင်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်နိုင်သည်။ မြန်မာပြည်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသားလှုပ်ရှားနေသော NGO (၇၀၀) ကျော်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ တချို့ ဆိုလျှင်သက်တမ်းနှစ် ၂၀ ထည်း ရောက်နေ၊ ကျော်နေကြပြီ။ NLD သည်သူတို့ နောက်က၀င်တန်းစီရမည်ဖြစ် သလိုသူတို့ ကလည်း သူတို့ ၏လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်လုလာမည်ကိုလျှောလျှော လျှူလျှူ ကြည့်နေကြမည်မထင်။ ထို့ ထက်အစိုးရက NLD ဘာအကြံနှင့်ဤ ခြေလှမ်းပြင်သည်ကိုသိသဖြင့်လုပ်၍မရလောက်အောင်နှောက်ယှက်နိုင်၊ တင်းကြပ်နိုင်သည်။
NGO လုပ်ငန်းများဝင်လုပ်ရန်စိတ်ကူးထက်ပိုဆိုးသောအကြံမှာ၊ ရွေးကောက် ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ကြရန်၊ လူတွေလမ်းမပေါ်ပြန်ရောက်အောင်လှုံ့ ဆော်မည့် ဒုတိယ၊ တတိယ “ဒီပဲယင်း”များပေါ်လာရေးစိတ်ကူးဖြစ်သည်။
ဤအကြံမှာသေစရာရှိလျှင် လူထုကိုအသေခံခိုင်းမည့်သဘောဖြစ်ရာလူထုက လုပ်ပါ့မလား။အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်အခြားရွေးစရာအဖြစ် “ရွေးကောက်ပွဲ” ကို အစိုးရကချပြထားတာရှိနေသည်။
ဆရာဦးဝင်းတင်နှင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်ဦးတို့ ကို မေတ္တာရပ်ခံလိုသည် မှာ “အဘတို့ ခင်ဗျား တာဝန်ကျေပါပြီ နားလိုက်ကြပါတော့ဗျာ” ဟူလို။
သို့ သော်NLD ထည်းတွင်လူတိုင်း “စုကြည်သရဏံဂစ္ဆာမိ” ဆက်လုပ်နေကြ သည်မဟုတ်။နောက်ဆုံးအချိန်တွင်“နိုင်ငံရေးသမား” တချို့ ပေါ်ထွက်လာ၍ တော်သေးရဲ့ဟုဆိုရ မည်။ ထိုသူများမှာပါတီတွင်းရှိ “အသက်ခြောက်ဆယ် တ၀ိုက်ရှိလူငယ်” များ ဖြစ်သည်။ ဦးခင်မောင်ဆွေ ၊ ဦးဝင်းမြင့်၊ ဦးသိန်းညွန့် ၊ ဒေါက်တာသန်းညိမ်း၊ ဦးစိန်လှဦး စသည်ဖြင့် –
ထိုသူများသည်ပါတီအသက်ရှင်ရေးအတွက်တန်ဘိုးဘယ်လောက်ပေးရသည် ဖြစ်စေပေးနိုင်သူများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် စစ်အစိုးရ၏နောက်တချီစိန်ခေါ် ပွဲ(ရွေးကောက်ပွဲ) ကိုမကြောက်ကြသူများဖြစ်သည်။
ကံဆိုးသည်မှာယခုလိုခေါင်းဧဧထားရမည့်အချိန်တွင်ပင် “စုကြည်သရဏံ ဂစ္ဆာမိ” သမားများကသူတို့ တလျှောက်လုံးလုပ်လာခဲ့သော “ခေါင်းဆောင် ကယ်ဆယ်ရေး” နိုင်ငံရေးကိုပင်ပါတီကိုပါချကြွေး၍ဆက်လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့ သော်ဤကံဆိုးမှုကြီးထည်းတွင်ကံကောင်းခြင်းမျိုးစေ့ပါတစ်ပါတည်း ကပ်ပါလာခဲ့ပြီးဖြစ်နေသည်။ စစ်အစိုးရကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရမလိုဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရ၏အကျပ်ကိုင်မှုက “ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်ရေးသမားများ” နှင့် “နိုင်ငံရေး သမားများ” မဖြစ်မနေကွဲထွက်သွားကြအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ် ကိုးကွယ်ရေးသမားများကပါတီအပျက်ခံ၍မနိုင်မှန်းသိသည့်တိုက်ပွဲကိုဇွတ် တိုက်ခဲ့သည်။ သူတို့ ကြောင့်ပါတီပျက်ရသည်တွင်(အဖျက်မခံရသည့်တိုင် နိုင်ငံရေးမလုပ်ရ) နိုင်ငံရေးသမားများကပါတီဟောင်း၏ ဒီမိုကရေစီဝိဥာဉ်ကို ထုံကူး၍တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်ပါတီဟောင်းကိုတစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခပေးခဲ့ သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှုကိုပစ်ချထားခဲ့ကာ ပါတီသစ်တစ်ခုထူထောင်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုရသွားသည်။
NLD ပျက်ရသည်မှာစစ်အစိုးရအနိုင်ကျင့်ခံရတာဟုလူထုနှင့်တကွတစ်ကမ္ဘာ လုံးကသိထားကြသည်ဖြစ်ရာအစိုးရကို မုန်းတီးကြသလောက်ပမာဏနှင့် အညီအမျှဖြစ်သောဂရုဏာကိုNLD ကခံယူရရှိမည်ဖြစ်ရာ ထိုဂရုဏာကိုမရှိ တော့ပြီ (သို့ မဟုတ်မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပြီ) ဖြစ်သော NLD ကအသုံးမပြုနိုင် တော့ဘဲNLD ၀င်စားသည့်ပါတီသစ်ကရရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။
ထိုဂရုဏာသက်မှုကိုယခုလိုပူပူနွေးနွေးရှိနေခိုက်အသုံးချနိုင်ဖို့ ကောင်းသည်။ ဂုဏ်သိက္ခာသက်သက်အတွက်တိုက်သွားကြသူများ၏နောက်တွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အနာခံ၍တည်ဆောက်ထားသောသိန်းနှင့်ချီရှိသောအင်အားများ အလဟဿမပြိုကွဲသွားအောင်တာဝန်သိတတ်သူခေါင်းဆောင်သူများက အဖတ်ဆယ်ကြရလိမ့် မည်။ Saints can be pure but statesmen must be responsible. ဟူသောအမေရိကန်နိုင်ငံရေးသုခမိန်စကားတခွန်းရှိသည်။
NLD တွင်အသစ်စက်စက်ဗဟိုကော်မတီဝင် ၁၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။ ထိုသူ များထည်းကစစ်အစိုးရ၏ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကခွင့်ပြုထားသောဂယ်ပေါက် (Loop hole) ကိုအသုံးပြု၍ပါတီသစ်တစ်ခုကိုဆင်တူယိုးမှားနာမည်တစ်ခုဖြင့် မှတ်ပုံတင်ကာရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ပါတီ၏အ မည်ကို “ဒီိမိုကရေစီအမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ်” ဖြစ်စေ၊ “ပြည်သူ့ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်” ဖြစ်စေ လူထုကဒါ NLD ပဲဟုခြေရာကောက်နိုင်သည့်နာမည်မျိုးဖြစ်လျှင် လုံလောက်ပြီ။
ယခုကဲ့သို့ တိုက်တွန်းရသည်မှာခိုင်လုံသောအကြောင်းရှိသည်။ လက်ရှိနိုင်ငံ ရေးလောကတွင်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်နိုင်ငံရေးပါတီဟူ၍ NLD နှင့် ၁၉၉၀ ခု နှစ်တုံးကပြိုင်ဘက်ဟောင်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ(တစည) တို့ သာ ရှိသည်။မှတ်ပုံတင်ရန်တာစူနေကြသောပါတီသစ်များသည်တင်းကြပ် သောရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကြောင့်၎င်း၊ မလုံလောက်သောမဲ ဆွယ်ပွဲကာလကြောင့်၎င်း၊ လွှတ်တော်ထည်းရောက်လာကြဘို့ ပင်မလွယ်ပါ။
ထို့ ကြောင့်ပါတီသစ်ထောင်၍ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖြစ်လျှင် NLD တဖြစ်လဲပါတီ သည်လွှတ်တော်ထည်းတွင်ရန်သူတော်ဟောင်း တစည နှင့်ပင်မဟာမိတ်ပြု ကောင်းပြုလျှက်အတိုက်အခံအဖြစ်ရပ်တည်ရဘို့ ရှိနေသည်။ မည်သူတွေက အများစုဖြစ်ကြ၊ အနိုင်ရကြမည်မှာမူ အားလုံးသိထားပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
မည်သို့ ဖြစ်စေဒီမိုကရေစီစံနစ်တရပ်တွင်ပီပြင်သောအတိုက်အခံအင်အားစု တစ်ရပ်ဥပဒေဘောင်အတွင်း၊ အထူးသဖြင့်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကြီးအတွင်း၌ ရှိကိုရှိနေရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာစံနစ်အရမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက် (system requirement) ပင်ဖြစ်သည်။
ဤသည်နှင့်ဆက်စပ်၍လက်ရှိတပ်မတော်အစိုးရသို့ ထောက်ပြလိုသည်မှာ အတိုက်အခံမရှိသောဒီမိုကရေစီစံနစ်တရပ်ကိုမြန်မာပြည်တွင်ဖန်ဆင်းပြလျှင် ကမ္ဘာကြီးကရယ်သွမ်းသွေးလိမ့်မည်၊ မိမိကိုလည်းယခင်အတိုင်းဆက်လက် ဆက်ဆံနေကြလိမ့်ဦးမည်ဆိုတာဖြစ်သည်။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့်တပ်မတော်ကနိုင်ငံရေးတွင်ဆက်လက်ပါဝင်နေဘို့ လိုအပ်နေသေးကြောင်းကိုတပ်မတော်ကိုယ်တိုင်ရှင်းပြနေစရာမလိုအောင် မြန်မာပြည်သားများကသော်၎င်း၊ ပြင်ပမှမြန်မာ့အရေးအကဲခပ်များကသော် ၄င်းသဘောပေါက်လက္ခံထားကြသည်။ ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံသည်လွပ်လပ်ရေး ရခဲ့သည့်အချိန်ကစ၍ဖြစ်တည်လာခဲ့သောကျဆုံးနေသောနိုင်ငံတော် (Failed state) တစ်ရပ်၏လက္ခဏာချက်များအမြောက်အများရှိနေရာ၎င်းတို့ ကို တပ် မတော်၏အကူအညီမပါဘဲအောင်မြင်အောင်ကုစားနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သို့ ဖြစ်လင့်ကစားဤသည်ကိုအကြောင်းပြု၍ပြည်တွင်းရေးရာ (in domestic policy) ၌ ဒီမိုကရေစီသို့ ကူးပြောင်းရေးကိုဆက်လက်ကြန့် ကြာနေရန်မသင့် လျှော်တော့သလို၊အင်္ဂါမစုံသောလူရယ်စရာဒီမိုကရေစီစံနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးမိလျှင်လည်းပိုဆိုးမည်ကိုသတိပြုဘို့ လိုသည်။
နိုင်ငံရေးသည်စစ်ရေးမဟုတ်သဖြင့်ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်အောင်လုပ်လို့မရ။ အထူးသဖြင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးဆိုလျှင်ပို၍သဘာဝမကျ။ လုပ်မိလျှင် သေမသွားဘဲပို၍အားကောင်းလာတတ်သည်ကို ၁၉၉၀ အတွေ့ အကြုံအရ သိနိုင်ကောင်းသည်။
အဆုံးစွန်ဆိုရလျှင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်သည်အမျိုးအစားအားဖြင့် ခပ်ညံ့ညံ့အတိုက်အခံမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်။ဤသို့ ခပ်ညံ့ညံ့နိုင်ငံရေးအတိုက်အခံကို ရှိနေသောကြောင့်သာစစ်အစိုးရသည်မျှကံကောင်းနေခြင်းဖြစ်ရာဘာကြောင့် မွေးမထားဘဲအသေသတ်ခဲ့သနည်း။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသစ်သည် NLD ကို မိမိဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေစေသလိုဖြစ်ခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရမျှော်လင့်ထားသောရွေးကောက်ပွဲတရားဝင်ဖြစ်မှုကို NLD တဖြစ် လဲပါတီအသစ်တစ်ခု ပါဝင်လာအောင်ဖေးမပေးခြင်းအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ယူ နိုင်သေးသည်။ စိတ်ဝင်စားလောက်အောင်ရွေးစရာပါတီတစ်ခုမျှမရှိသဖြင့်မဲ ထည့်နိုင်သောလူဦးရေစုစုပေါင်း၏တ၀က်ကျော်မဲရုံသို့ ရောက်မလာကြလျှင် (clearly low voter turn-out) ရွေးကောက်ပွဲ၏တရားဝင်မှုကိုအသိအမှတ် ပြုရန်ခက်လိမ့်မည်သာမကနောင်တက်လာမည့်အစိုးရသစ်၏ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ဆက်ဆံရေးသည်ယခုအတိုင်းပင်ဆက်လက်၍ခက်ခဲနေလိမ့်ဦးမည်သာ။
About Oo Bo
U Bo Thakhin has written 1 post in this Website..
View all posts by Oo Bo →
It is wrong to blame NLD for their boycott to unjust election laws and participation in so-called election. NLD does not intend to submit to the constitution and law which guarantees the power grip of Military and its raping of Burma. There is no such thing as personal worshipping of Daw Suu in NLD. All responsible leaders and members of democracy must have the courage to counter the unjust systems forced by the Junta. NLD got no reasonable options but to boycott the election, so do the ordinary people of Burma. They will show their disapproval of unjust laws by staying indoor, desert the streets/ polling stations on election day. If Junta dare to send the criminal thugs to every households, let it be in the day light under the global spotlight. If they dare to dismantle the NLD offices, let it be. There is no point for reasonable person to give full submission and approval to the Junta-approved military dominance parliaments and sit with equally Satanist NUP or even to consider NUP as partner in parliaments. It is dream of Than Shwe and I wonder this article had been influenced by Than Shwe, tactical rapist. NLD is peaceful party and this fact is lucky for rapist ciminal Than Shwe but the same fact can one day kill the idea of Than Shwe. Watch out. I encourage everyone to make comment to this article and my response.
အင်း အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ… ခုမှနဲနဲရေလည်သွားတော့တယ်… ကျတော် eleven media မှာတောင် ထင်မြင်ချက်တွေပေးခဲ့သေးတယ်… အခုမှအုပ်စုတွင်းက အကြောင်းတွေသိတာဗျား.. ကျေးဇူး
Mr. Timothy ရဲ့ အမြင်ကိုတော့ သိပ်သဘောမကျမိပါ။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ နိုင်ငံရေးလုပ်မယ့်သူတွေမှာ ခံစားချက်မရှိသင့်ပါ။ အကျိုးနဲ့ အကြောင်းကို ဆက်စပ် တွေးမြင်ဖို့ထက် ခံစားချက်တို့၊အမုန်းတရားတို့ပိုများနေရင်တော့ နိုင်ငံရေးလောကထဲဝင်ပြီး မြန်မာတွေ ပိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မနေကြပါနဲ့လား။ ၈၈ တုန်းက ကျွန်တော် သူငယ်တန်းပါ။ အခုဘွဲ့ရပြီးပါပြီ။ တလျှောက်လုံးမှာလည်း မကျေနပ်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် ဆားတစ်ပွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နှမ်းတစ်စေ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရတာကို ရတုန်းယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း မဲပေးဦးမှာပါပဲ။ မကြိုက်တဲ့သူကို မကြိုက်သလို၊ ကြိုက်တဲ့သူကို ကြိုက်သလို….
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ သတ္တိရှိတဲ့၊ သစ္စာရှိတဲ့၊ စတေးခံ၇ဲတဲ့၊ မဟုတ်မခံတဲ့၊ ၇ဲ၇င့်တဲ့၊ အနစ်နာခံတဲ့၊ စွန့်စားတဲ့၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ ၊ ရိုးသားတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပဲ ရှိတယ်။ ပြည်သူတွေကိုသူတို့တွေလိုပဲလိုက်လုပ်စေချင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ဘာ၇လဒ်မှ၇အောင်လုပ်မပေးနိုင်ဘူး၊ သူတို့ နဲ့ အတူပြည်သူတွေကို ဒုက္ခထဲမှာေ၇ာက်စေတယ်။
ဉာဏ်အမျှော်အမြှင်ကြီးတဲ့၊ ပါးနပ်တဲ့၊ ပ၇ိယာယ်ကြွယ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေမရှိဘူး။ အဲဒါက မဆလခေတ်၇ဲ့ အမွေဆိုးပဲ၊အဲဒီလိုခေါင်းဆောင်မမွေးဘူးဆိုတဲ့ မဆလ၇ဲ့ အခြေခံလမ်းစဉ်ကြောင့်ပဲ။ အဲဒါတော့ ပြည်သူတွေလဲ အဲဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အတူဒုက္ခေ၇ာက်ကြ၇တယ်။ ၇လဒ်ကိုအခြေခံတဲ့ လမ်းစဉ် NLD မှာမရှိဘူး၊ အမုန်း၊ ဒေါသ၊ မာန၊ ဂုဏ်သိက္ခာ တွေကိုအခြေခံတဲ့လမ်းစဉ်ပဲရှိတယ်။ ၇လဒ်ကိုအခြေမခံတဲ့အတွက် အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံး ဘာ၇လဒ်မှမ၇ဘဲလမ်းကြောင်းပျောက်သွား တယ်။ လက်ရှိအစိုး၇မှာက ၇လဒ်အခြေခံတဲ့လမ်းစဉ်ရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ NLD နဲ့ အစိုး၇နဲ့ အဓိကကွာဟချက်ပဲ။ အဲဒါကြောင့်လဲပဲ အစိုး၇က NLD ကို ခလေးကယောက်ထိန်းသလိုပဲ ထိန်းနိုင်တယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စနစ်ကြတဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ၊ procedure၊၇လဒ်အခြေခံလမ်းစဉ်ရှိတဲ့အဖွဲ့ အစည်းက တခုပဲရှိတယ်၊ အဲဒါက လက်ရှိအစိုး၇ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါ့အပြင်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင်းပိုပြီးတော့ တောင့်တင်းတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီလိုအဖွဲ့ အစည်းမျိုးနဲ့ သတ္တိ၊ သစ္စာ၊ အမုန်း၊ ဒေါသ၊ မာန၊ ဂုဏ်သိက္ခာ တွေကိုအခြေခံ တဲ့ လမ်းစဉ်ပဲရှိတဲ့ NLD တို့ တွေကြ၇င် ဘယ်သူနိုင်မယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းပြတ်သားနေတာပဲ။ အဲဒါကိုမှ နံ၇ံကိုခေါင်းနဲ့ တိုက်မယ်ဆို၇င် ကိုယ့်ဖာသာတိုက်ကြပါ၊ ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ ။
NLD အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို၇င် သဘောထားပျော့ပြောင်းတဲ့၊ ဉဏ်အမျှော်အမြှင်ကြီးတဲ့၊ ပါးနပ်တဲ့၊ ပ၇ိယာယ်ကြွယ်တဲ့ အပြင်လူတွေကို ဒေါ်စု၇ဲ့ အကြံပေးအနေနဲ့ ထားသင့်တယ်။ အခုကြည့်NLD ကခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးက အ၇င်က မဆလ ပါတီ၊ တပ်ထွက် ဒါမှမဟုတ် မဆလ မုန်းတီးတဲ့ သူတွေဖြစ်နေကြတယ်။ သဘောထားတင်းမာ၇င် အမြင်မရှင်းလင်းတော့ဘူး။ အခြေအနေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်၇င် ဘာလုပ်ကိုင်၇မယ်ဆိုတာ မမြင်တော့ဘူး၊ ၀ိုးတိုးဝါးတားလမ်းစဉ်ပဲ ထွက်လာမယ်။
အပြင်လူဆိုတာက တပ်နဲ့ မပတ်သက်သူ၊ အတိုက်အခံတွေနဲ့ မပတ်သက်သူ ကြားလူဖြစ်တယ်။ အဲဒါမှ NLD မှာရှိပြီးသားအ၇ည်အချင်းတွေနဲ့ သူ၇ဲ့အ၇ည်အချင်းတွေနဲ့ ၇ လဒ်တွေကိုယူဆောင်ပေးနိုင်မယ်။ မဟုတ်ဘူးဆို၇င်တော့ နောက် အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ တစ်၇ာ ကြာမလားပဲ။
NLD လူငယ်တွေကိုတော့ အပြစ်မတင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ လူငယ်ဆိုတာ က ”သတ္တိ၊ သစ္စာ၊ စတေး၊ မဟုတ်မခံ၊ ၇ဲ၇င့်၊ အနစ်နာခံ၊ စွန့်စား၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ၊ ရိုးသား ” ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို သဘောတွေ့ ကြတယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ တွေကအဲဒီလိုခေါင်းဆောင် တွေကိုသဘောကြပြီးနောက်ကလိုက်ကြတယ်၊ သူတို့ လဲအစတေးခံ၇တယ်။ သူတို့ မိသားစုတွေလဲ အကုန်ဒုက္ခေ၇ာက်ကြတယ်။ ဒါတွေကNLD ခေါင်းဆောင်တွေ၇ဲ့ ပါး၇ည်နပ်၇ည် မရှိမှု၊ ဉဏ်အမျှော်အမြှင်မရှိမှု၊ ပ၇ိယာယ်မကြွယ်မှုကြောင့်ပဲ။ ဗန္ဓုလခေတ်ကလမ်းစဉ်တွေနဲ့ သွားနေ၇င်တော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဗန္ဓုလ စစ်မြေပြင်မှာ သူ့ စစ်သည်တွေ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွအောင် ထီဆောင်းပြီးအရှေ့မှာသွား၇ပ်တော့ အင်္ဂလိပ်ကမြင်တော့ အမြှောက်နဲ့ ပြစ်ေ၇ာ၊ သူလဲလျှာသူ၇ဲကောင်းဖြစ် မြန်မာပြည်သူတွေလဲ အင်္ဂလိပ် ကျွန်ဖြစ်၊ ဘာ၇လဒ်ရှိလဲ။ ထားပါတော့ ဗန္ဓုလကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး အဲဒီခေတ်မှာ စစ်ရှုံးပြန်၇င် ဘု၇င်ကသတ်မှာကိုး။ တကယ်ဆို အင်္ဂလိပ် တွေ မြန်မာပြည်ကနေဂျပန်တွေကိုခံမတိုက်ဘူး၊ India ကိုနောက်ဆုတ်သွားတယ်၊ အားဖြည့် ပြီးနိုင်လောက်မယ်ဆိုမှ အဖက်ဖက်ကပြင်ဆင်ပြီးတိုက်တာ၊ နိုင်တာပဲ။ အဓိကက ၇လဒ်ပဲ။